IFTIINKACUSUB.COM: Ma ogtahay in Balanbaalista cuntadeeda ugu muhiimsani ay tahay ilamada Yaxaaska!!
Ma ogtahay in Balanbaalista cuntadeeda ugu muhiimsani ay tahay ilamada Yaxaaska!!
Waxa dhawaan la ogaaday arrin aad caajib u noqday, oo lagu sheegay in ilmada yaxaasku ay raashin u tahay balanbaalista. Waxa la cadeeyay in laga ogaaday in balanbaalistu ay ka hesho ilamadaasi nafaqooyin kala duwan oo cusba ah sida: sodium iyo macdana kale oo farabadan.
Ku waasi oo la sheegay in la ogaaday inay iyaduna u adeegsato sidii ay ukun u dhali lahayd, waxa kale oo intaas lagu darray in diinka laftiisa ay balanbaalistu ay ka hesho dheecaanada indhihiisa ka soo baxa, macdan ay ugu faa’iidaysato tarankeeda
Sidaasi ayay dunidu isugu wada xidhan tahay oo xayaawanada ay u kala faa’iidaystaan iyagoo aadamuhuna ka faa’iidaysto dhamaantood.